Nhau - Ndeupi musiyano uripo pakati penyika vharuvhu nevharuvhu yesuwo?
Ndeupi musiyano uripo pakati penyika vharuvhu uye gedhi vharafu?
Globe mavharuvhu, magedhi mavharuvhu, mavharuvhu mavharuvhu, cheki mavharuvhu uye bhora mavharuvhu, nezvimwe. Aya mavharuvhu ave zvino akakosha kudzora zvikamu mumhando dzakasiyana dzemapaipi masisitimu. Mhando yega yega yevhavha yakasiyana nechitarisiko, chimiro uye kunyange chinangwa chinoshanda. Nekudaro, iyo vharuvhu yekumira uye vharafu yesuwo zvine zvimwe zvakafanana pakuonekwa, uye zvese zviri zviviri zvine basa rekucheka mupombi. Naizvozvo, shamwari zhinji hadzizive nevhavha inozovhiringidza nezvavo. Muchokwadi, kana iwe ukanyatsocherechedza, mutsauko uripo pakati pegavhu repasi uye vharafu yesuwo yakakura kwazvo. Heano mutsauko uripakati penyika vharuvhu uye vheji vharafu:
1. Iyo inoshanda musimboti yeglove vharafu uye gedhi vharafu rakasiyana
Kana vharuvhu yekuvhara yakavhurwa uye yakavharwa, hunde yevhavha inokwira. Dzorera wiri remaoko, uye wiri remaoko rinotenderera uye kusimudza nevhavha yevhavha; ukuwo vharuvhu yesuo, painotenderedza wiri inowoneka nemaoko kuita kuti vharuvhu yacho ikwire ichikwidza nekudzika, vhiri remumaoko harifambe.
Vheji yegedhi ine chete nyika mbiri: yakavhurika zvizere kana yakavharwa zvizere. Iyo yekuvhura nekuvhara sitiroko yakakura, uye nguva yekuvhura nekuvhara yakareba; kufambisa kwekurova kwe wedge yevhavha yekumisa idiki zvakanyanya, uye wedge yevhavha yekumira inogona kumira pane imwe nzvimbo panguva yekufamba, kuitira kuti ishandiswe pakuyerera kugadzirisa, nepo vheji vheji ingangoshandiswa chete kucheka. -off uye haina mamwe mabasa.
2. Musiyano wekuita pakati penyika vharuvhu nevharuvhu yesuwo
Iyo yekuvhara-yekuvhara vharafu inogona kushandiswa yekucheka-kure uye kuyerera kuyerera. Kuramba kwemvura yevhavha yepasi rose kwakakura, uye kunonetsa kuvhura nekuvhara, asi nekuti chinhambwe pakati pechikwiriso nekuvhara chisimbiso ipfupi, saka sitiroko yekuvhura nekuvhara ipfupi.
Vheji yegedhi inogona kuvhurwa zvizere uye kuvharwa zvizere. Kana ichivhurwa zvakazara, iyo yepakati kuyerera kuramba muvhavha yemuviri chiteshi ingangoita zero, saka kuvhura nekuvhara kwevhavha yegedhi ichave yakanyanya-kuchengetedza basa, asi wedge iri kure nenzvimbo yekuisa chisimbiso saka kuvhura nekuvhara nguva yakareba.
3. Iyo yekumisikidza kuyerera nzira musiyano pakati penyika vharuvhu uye gedhi vharafu
Mhedzisiro yevhavhavha yekugedhi mumativi ese maviri yakafanana. Iko hakuna kudikanwa kweiyo yekupinda uye nzira yekubuda yekumisikidza, uye iyo yepakati inogona kuyerera mumativi ese ari maviri.
Asi vharuvhu yepasi inoda kuiswa mukuomerera zvinoenderana nekwakanongedzwa nemuseve pane muviri wevhavha.
4. Musiyano wechimiro pakati pegavhu repasi uye vharuvhu yesuo
Maumbirwo evharuvhu yesuwo anozove akaomarara kupfuura vharuvhu yepasi. Kubva pakuonekwa, vheji regedhi rakareba kupfuura vharuvhu yepasi uye vharuvhu yepasi yakareba kupfuura vharuvhu yegedhi yehukuru hwakaenzana. Uye zvakare, vharuvhu yegedhi ine dhizaini yekukwira hunde uye isingasimuke, asi vharafu yepasi haina mhando yemusiyano.
Angle Globe Valve, Trunnion Bhora Valve, Sluice Gate Valve, Stainless Simbi Gate Valve, Gedhi reMvura Valve, Stainless simbi Ball Valve,